Nehọm 2 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
2 Onye na-achụsasị ndị mmadụ agbagotewo n’ihu+ gị. Chee ebe e wusiri ike nche. Chee ụzọ nche. Kee ájị̀ n’úkwù. Mee ka i nwekwuo+ ume. 2 N’ihi na Jehova ga-eweghachi ịma mma Jekọb,+ dị ka ịma mma Izrel, n’ihi na ndị na-ebibi ihe ebibiwo ha;+ ha alawokwa alaka ha n’iyi.+ 3 E sijiri ọta ndị dike ya ka ọ chawa ọbara ọbara; ndị ya dị ike yi uwe na-acha uhie uhie.+ Ígwè a rụnyere n’ụgbọ ịnyịnya agha ya na-egbuke egbuke dị ka ọkụ n’ụbọchị ọ na-ejikere agha, e mewokwa ka ube ndị e ji osisi junipa+ mee mee mkpatụ. 4 N’okporo ámá ka ụgbọ ịnyịnya agha na-agba ara ara.+ Ha na-agbagharị n’ámá obodo. Ha dị ka ọwa na-enwu ọkụ. Ha na-agba ọsọ dị ka àmụ̀mà.+ 5 Ọ ga-echeta ndị dike+ ya. Ha ga-asụ ngọngọ mgbe ha na-aga ije.+ Ha ga-agaru ná mgbidi ya ọsọ ọsọ, a ga-emekwa ka ihe nchebe ya sie ike. 6 A ga-emeghe ọnụ ụzọ ámá nke osimiri, a ga-agbazekwa obí eze ya. 7 A kawo ya aka; a gbawo ya ọtọ; a ga-akpụrụ ya laa,+ ndị ohu ya nwaanyị ga-akwa ákwá, dị ka ebe nduru+ na-ebe ubé, ha ga-eti aka n’obi+ ugboro ugboro. 8 Ninive dị ka ọdọ mmiri+ malite n’ụbọchị o bidoro ịdị;+ ma ndị mmadụ na-agbazi ọsọ. “Kwụsịnụ! Kwụsịnụ!” Ma ọ dịghị onye na-ele anya n’azụ.+ 9 Bukọrọnụ ọlaọcha; bukọrọnụ ọlaedo;+ ebe ọ bụ na akụ̀ ya enweghị ọgwụgwụ. Ụdị ihe niile a na-achọsi ike+ dị ọtụtụ. 10 Obodo tọgbọ n’efu, tọgbọrọkwa chakoo, ọ ghọwokwa mkpọmkpọ ebe!+ Obi na-alọkwa+ ndị mmadụ mmiri, ikpere+ na-ama ha jijiji, úkwù+ na-egbukwa mmadụ niile oké mgbu; ihu ha niile achagharịwokwa.+ 11 Olee ebe ọgba ọdụm dị, oleekwa ebe ọgba ụmụ ọdụm tojuru etoju dị, bụ́ ebe ọdụm jeere ije banye,+ ebe nwa ọdụm nọ, ọ dịghịkwa onye na-eme ka ha maa jijiji?+ 12 Ọdụm nọ na-adọrisiri ụmụ ya anụ ga-ezuru ha, ọ nọkwa na-adọgburu nne ọdụm anụ. O mekwara ka ọgba ya jupụta n’anụ ọ dọgburu, meekwa ka ebe ọ na-ezo jupụta n’anụ ọ dọrisịrị adọrisị.+ 13 “Lee! Ana m emegide gị,” ka Jehova nke ụsụụ ndị agha+ kwuru, “m ga-agba ụgbọ ịnyịnya agha ya ọkụ, ha akwụọ anwụrụ.+ Mma agha ga-eripịa ụmụ ọdụm+ gị tojuru etoju. M ga-ebipụkwa anụ oriri gị n’ụwa, a gaghịkwa anụ olu+ ndị ozi gị ọzọ.”